Iyada oo ay caan iyo muuqaalada fantastik ah ee Android, in badan oo dadka isticmaala Nokia iska ilaawaan Nokia ah ee Android. Sida mid ka mid ah, waxaa laga yaabaa in aad Dhectuuro markii helitaanka dhaldhalaalaan phone Sony Ericsson Xperia. Si kastaba ha ahaatee, waxa aad ogolaanaysaa hoos u yahay in ay adag tahay in la wareejiyo files ka Nokia in Sony. Haddii aad dhibaato this, waxaad tahay mid aad u nasiib badan. Halkan waa Nokia in Sony qalab kala iibsiga fiican oo aad u siidaysay ka this. Waa Wondershare MobileTrans . Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ka Nokia wareejiyo fariimaha qoraalka ah, music, sawiro, SMS iyo xiriirada in Sony si fudud.
Faylal ay ka Nokia wareejiyo Sony Efforlessly
Iyadoo qalab Nokia in Sony kala iibsiga, aad awoodaan si ay u gudbiyaan xiriirada, sawiro, video, music iyo SMS ka Nokia in Sony ee 1 click.
Bedelka xiriirada ka Nokia in Sony la click hal.
Beddelaan iyo wareejiyo video iyo maqal ah si Sony qaab socon.
Copy photos iyo fariimaha qoraalka ah ka Nokia in Sony xawaare degdeg ah.
Kaabta telefoonka Nokia in kombuyuutarka, si aad mar dambe u soo celin kartaa si aad telefoon Sony.
Taageerada Symbian 40/60 / ^ 3, Windows 8 / 8.1 iyo 2.1 Android iyo sare.
1 Click kala iibsiga, Sidaas Quick
Waa loo baahnayn in mid ka mid wareejiyo files ka mid. Hase yeeshee, waxa kuu ogolaanayaa inaad wareejiyo dhammaan faylasha 1 click.
Transfer Xiriirada, SMS iwm
Sidaa daraadeed, waxa ay siinaysaa fursad ay ku wareejiso xiriirada, SMS, video, sawiro iyo music ka Nokia in Sony aad.
Wax macno ah ma markii labada telefoonada waxaa ka mid ah shirkado kala duwan. Waxaa awood si ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya laba taleefan kasta.
Waxay leeyihiin oo kaliya phone Nokian hadda. Waxaad sameyn kartaa in gurmad aad Nokia hore ka dibna loo soo celiyo si ay Sony ka dib.
Taageerayaan daydo Nokia oo Sony
Windows 8 / 8.1 Nokia N8, Nokia E6, Nokia 5320 XpressMusic, Nokia 5320, Nokia N97, N97 Nokia mini, Nokia N96, Nokia E72, Nokia 5228, Nokia 6760 Slide, Nokia 6790 BADANEYSA, More halkan >>
Android 2.1 ama wax ka sareeya Sony Ericsson LT26i Xperia Arc HD, Sony Ericsson LT18i Xperia Arc, Sony ST26i Xperia J, ony Ericsson C6603 Xperia Z, Sony Ericsson C6602 Xperia Z, Sony Ericsson ST25i Xperia U, Sony C2105 Xperia L, More halkan >>
Qeybta 1: Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka Nokia in Sony iyada oo 1 Click
Qeybta 2: kaabta Your phone Nokia oo soo celiya in aad Sony
Tallaabada 1. Daahfurka Nokia ay u Sony Transfer Phone Tool
Waxa ugu horeeya waa in ay soo baxdo iyo rakibi Wondershare MobileTrans ee kombiyuutarka. Waxaa Launch. In ay suuqa kala rasmiga ah, riix Start inuu soo galo suuqa kala iibsiga Nokia in Sony.
Tallaabada 2. hesho Nokia oo Sony Phone Connected
Ka qaada fiilooyinka USB ah in ay ku xidhmaan labada Nokia oo Sony phone in kombiyuutarka. Sida ugu dhakhsaha badan si guul ah la ogaado, ay ku tusi doonaa ilaa uu furmo.
Tallaabada 3. fariimaha qoraalka Transfer, Xiriirada, Video, Music iyo Photos ka Nokia in Sony
Dooro files aad u socoto si ay u gudbiyaan ka dibna riix Start Copy . Inta lagu guda jiro habka kala iibsiga Nokia in Sony, sii labada telefoonada xiran.
Wixii WinPhones, Mobiletrans ma taageeri in aad nuqulka SMS weli. Si ka WinPhone wareejiyo xiriirada si Android, fadlan marka hore dib u kor OneDrive, markaas Mobiletrans Wondershare soo celin karo xiriirada si ay telefoonka bartilmaameedka Android ah.
Your phone Sony weli waa ku kala dambaynta? Wax macno ah ma. Waxaad sameyn kartaa in gurmad aad Nokia files si computer ugu horeysay. Markaas, waxaa markii dambe soo celiyo si aad telefoon Sony.
Tallaabada 1. Download iyo rakib Wondershare MobileTrans ah
Download iyo rakibi qalabka kombiyuutarka. Markaas, waxa maamula si ay u helaan oo ay suuqa kala hoose. Tag kaabta iyo Soo Celinta hab adigoo gujinaya kaabta .
Tallaabada 2. kaabta faylasha aad Nokia Phone
Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan telefoonka Nokia in kombiyuutarka. Marka si guul leh la ogaado, telefoonka Nokia lagu soo bandhigi doonaa bidixda.
Sida aad ka arki, awoodo gurmad xiriirada, SMS, video, muusig iyo sawiro ku saabsan telefoonka Nokia aad. Hubi faylasha aad rabto in aad gurmad ka dibna riix Start Copy .
Tallaabada 3. Soo Celinta Your Sony Phone la kaabta ah File Nokia
Dhinaca geeska bidixda ah ee kore, guji Back to homepage . Riix Soo Celinta inay soo galaan suuqa kala dib u soo kabashada. Raadi iyo sax gurmad Nokia ah file bidixda. Markaas, content ee file gurmad ku cad dhexe. Dooro content doonayay oo guji Start Copy .
Sida loo Demi Faylal ay ka iPhone in Android?
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga One Android Phone in kale?
Sida loo Copy iPod Music inay Android?
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Nokia si iPhone?
Sida loo Copy Photos iyo More ka iPad in Android?
Sida loo Copy Xogta laga Nokia in Samsung?
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Music, SMS, Video, Photos iyo Xiriirada ka Nokia in Sony